विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने तालिका, कुन देशमा कहिले उडान हुन्छ, भाडा कति लाग्छ ? हेर्नुहोस | RatoTara.com Websoft University
विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने तालिका, कुन देशमा कहिले उडान हुन्छ, भाडा कति लाग्छ ? हेर्नुहोस
सिसीएमसी स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार जेठ ३२ देखि असार ११ गतेसम्मको उडान तालिका बनेको छ। यसमा एकै दिनमा विभिन्न देशमा उडानहरू हुने छन्। उद्धार उडानका लागि मन्त्रालयले नेपालबाट सरकारी स्वामित्वको नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सका जहाज पठाउने छ।